ဂျပန် မော်ဒယ် ကေရို ဆာတို(Kayo Sato) က သူမသည် ယောကျား ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဂျပန် မော်ဒယ် ကေရို ဆာတို(Kayo Sato) က သူမသည် ယောကျား ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံ
ဂျပန် မော်ဒယ် ကေရို ဆာတို(Kayo Sato) က သူမသည် ယောကျား ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံ
Posted by ဆူး on Oct 1, 2010 in Arts & Humanities | 21 comments
2010 Kayo Sato video ဂျပန်မော်ဒယ် ကေရို ဆာတို
အေးပေါ့အေးပေါ့ အမှန်တရားကိုဝန်ခံတာတော့ဘောကျသဗျို့ 
အကယ်စင်စစ် ကျွန်တော် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုဟာလည်း ငပေါတစ်ယောက်ဖစ်ပါဒယ် လို့ ဝန်ခံပါတယ်
မိုက်ကယ် ဂျော်နီ အောင်ပု ငပေါ ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံတဲ့ ကိစ္စကို ယုံမှား သံသရ မရှိ လက်ခံပေးပါတယ်။
ကျားလဖြစ်လဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး ချောဖို့ပဲလိုတာပါ အလှကြည့်ဖို့ပေါ့နော်
မယုံဘူး မယုံဘူး…………သံသယတွေ နှောက်ယှက်နေအုံးမှာဘဲ….လက်တွေဘဲယုံတယ်
မြန်မာပြည်က မာမီတွေ မော်ဒယ်တွေ မင်းသမီးတွေကလဲ
ကယို (Kayo)က ပြထားတဲ့စာရွက်မှာ ရေးထားတာက..
၀င်လိုက်၊ ထွက်လိုက်၊ တဲ့..။
သူ့စိတ်က ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ ယတိပြတ် မဆုံးဖြတ်ရသေးတာကို ပြောချင်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရက်စက်လိုက်တာ ကျွန်နော်ကသူ့ကို အတည်ကြံမလို့။
ဘာတွေ ကြောနေကြတာ တုန်း.. နားကိုမလည်တော့ဝူး..
မိန်းကလေးအတိုင်းပဲ ချောချောလေးနဲ့ ချစ်စရာလေးနော် …
အင်း သူပြောလို့သာသိရတာ မဟုတ်ရင် သိတောင်သိမှာဟုတ်ဘူးနော်…
အင်းနော် ယောက်ကျားဆို ဇလုပ်ပါရမှာ… ဒီတစ်ခုတော့ လိမ်လို့မရဘူးထင်တယ်… ဖိုတိုဂရပ်ဖာတွေနဲ့ မိတ်ကပ်ပေါင်းပြီး ဖျောက်ထားတာထင်တယ်…
ဇလုတ် က ဆာဂျရီ လုပ်လို့ရပါတယ်ကွယ်..
အသံအိုးတွေ အသံကြိုးတွေလည်း ..(အတိုင်းအတာ တခုထိ)
ဖိုတိုဂလပ်ဖာတွေကို လူညာဂျီးဒွေလို့ ကျောဘာနဲ့နော်…
ဒါနဲ့ ဂျကားမစပ် မဇာဂီ အဲဒီပုံလေး တော်တော် လှတယ်နော်။
ခေါင်းပေါင်း ကနေ ပြောင်းလဲလိုက်တာလား။
သူတို့ ဘယ်လောက်မျက်လှည့်ပြတတ်လဲဆိုတာ သိဒယ်…. ပိုတိုရှော့နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ပိုဆိုး…
wow လိုမတောက်တခေါက်တောင်မှ ဂီဂီ့ကိုဘ၀ပြောင်းပစ်လို့ရဒယ် (ပုံကိုပြောပါဒယ်)….
ဟဲဟဲ ခင်လို့ တခုတော့ ပြောပြမယ်…
ဂျွန်လန်နွန်ကို ရိုက်ပေးဖူးတဲ့ ဂျာပွန်လူမျိုး ဒါ့ပုံဆြာ ..
ခုတော့ အဘိုးကြီးပေါ့ ..သူနဲ့သာ ရိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် …
အသက်အရွယ် အဆင့်အတန်း ..အလွှာ မရွေး …
တကိုယ်လုံးချွတ်ဆို ချက်ခြင်း ချွတ်ကြမှာတဲ့ ….. သည်ကမိန်းမတွေများပြောပါတယ်..
သူကလည်း အဲ့လို အနုပညာ မှော် အောင်သူရယ်လေ…
မက်စိမှာတောင် …မိုင်ဂေ့ါထ်- ယွာ ဖေ့စ်အိုမ် ဂေါ်န္နာမစ်စ် လို့ ရေးထားသေးတာကိုး…
မောင်ကောင်း ကို says:
အဲလောက်ချစ်စရာကောင်းတာလေးက ယောက်ျားကြီးတဲ့ မယုံဘူး။x1000